Cable Extrusion Chinyorwa, Kuzadza Chinyorwa, Insulation Tepi - IMWE NYIKA
Kuwedzera Kwezvinhu Zvakateedzana
Kuzadza Chinyorwa Series
Semi-inoitisa Tepi Series
Moto-unodzora Tepi Series
Simbi Tepi Series
Mhangura Yakapfeka Aluminium-magnesium Alloy Wire
Yakapetwa-kaviri Fiber Chembe Yakagadzirwa Mica Tepi
Mhangura Foil Mylar Tepi yeCable Kudzivirirwa
Polyester Firimu / Polyester Tepi / Mylar Tepi
Kwakakurudzira Steel Wire kuti Cable Stranding
Semi-inoitisa Nylon Tape
Isina-yakarukwa Jira Tepi
Semi-inoitisa Filler Tambo
Tarisa pane waya uye tambo resolution
Batsira waya uye tambo fekitori kukurumidza kusimudzira
Inotungamira neepamberi tekinoroji
Nedu tega mahunyanzvi pane yekugadzira tekinoroji, zvakare shandira pamwe newaya uye tambo tambo yekutsvagisa nzvimbo, vatinoshanda navo, kukudziridza tambo uye tambo zvigadzirwa zvine zvirinani kuita uye kwakaderera mutengo.
Yemahara sampuro yekuyedzwa (Kwete kusanganisira extrusion zvinhu)
Batsira mutengi kusarudza izvo zvakanaka zvinhu
Kuongorora kwezvinhu zvakapedzwa usati watumira
Kazhinji, zvinhu zvichaendeswa mukati memazuva manomwe kusvika gumi nemashanu mushure mekusimbiswa kweodha.
2 Matani eAramid Yarn akatumirwa kuVietnam
Isu tinofara kugovana kuti isu tangoendesa matani maviri eAramid Yarn kumutengi wedu kubva kuVietnam. Aramid Yarn inowanzo shandiswa seisina-esimbi kusimbisa kweADSS oparesheni tambo, dzisiri-esimbi yekunze Optical tambo uye zvemukati Optical tambo. (Kuisa iyo Armaid Yarn) Mutengi uyu mutengi mutsva kwatiri. Mushure mekunyatso kuenzanisa technical parameter nemitengo, uye kuyedza yemahara sampuli yatakapa, isu takazosvika kubatana. Ndinotenda kuti kwedu ramangwana mushandirapamwe ichava ...
Kutumirwa kweTin-yakavharwa Mhangura Yakasungwa waya
Mwedzi uno, Imwe nyika tambo yezvinhu yakatumira imwe batch yetiini yemhangura yakasungwa waya kuAlgeria. Tini-yakavharwa mhangura yakakoswa netambo inowanzo shandiswa tambo dzerabha dzakasungirirwa mugodhi, tambo dzakapfava, tambo dzakapfava uye tambo dzeMarine seyakadzika waya waya, uye inoshandiswa seye tambo yekunze nhoo yekukomberedza dura uye bhurasho tambo Iyo tini yemhangura yakasungwa waya yakaputirwa netete rukoko pamusoro penzvimbo isina tara yemhangura yakakoswa waya kudzivirira kusangana kweiyo waya yemhangura. Isu tinogadzira zvakatemwa ...
12 Matani eMylar Tapes akaendeswa kuPhilippines
Isu tinofara kugovana kuti isu tangoendesa matani gumi nemaviri ematepi epolyester kumutengi wedu kubva kuPhilippines. Iyi ndiyo odzo yekudzoka zvakare, mutengi akambotenga mamwe saizi polyester matepi pamberi, vanoziva mhando yezvigadzirwa zvedu uye kugona kwedu kupa zvakanyanya, nekuti tinogona kupa chero ukobvu hwe polyester tepi inodikanwa nevatengi, kubva 10um kusvika 100um, chero saizi inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa. Uye zvakare, isu tinopa kukwikwidza ...
Kero: Xinsheng Plaza, Hubei Road, Xuzhou, China